GoSite: Madal Dhammaan-In-Hal ah oo loogu talagalay Ganacsiyada Yaryar ee loogu talagalay Dijital | Martech Zone
GoSite: Madal Dhammaan-In-Hal ah oo loogu talagalay Ganacsiyada Yaryar ee loogu talagalay Dijital
Wednesday, September 16, 2020 Talaado, September 15, 2020 Douglas Karr
Isdhaxgalka si gaar ah uma sahlana inta udhaxeysa adeegyada ganacsiyadaada yar yar ubaahan yihiin iyo meelaha laga heli karo Qalabaynta gudaha iyo waayo-aragnimada macaamiisha aan xaddidnayn inay si fiican u shaqeeyaan waxay ka noqon kartaa miisaaniyad ganacsiyada yaryar badankood.
Ganacsiyada yar-yar waxay u baahan yihiin shaqeynta inta badan meerayaasha:
website - degel nadiif ah oo loogu talagalay raadinta maxalliga ah.
Rasuulka - awoodda si wax ku ool ah oo si fudud loola xiriiri karo waqtiga dhabta ah ee rajada leh.
jaale - jadwalka is-u adeegsiga ee kansarka, xusuusinta, iyo awooda jadwalka.
Lacagaha - awoodda qaansheegta macaamiisha oo ay ku bixin karaan lacag.
Reviews - kartida uruurinta, kormeerka, iyo ka jawaabista dib u eegista macaamiisha.
Maamulka Xiriirka Macaamiisha - Macluumaadka macaamiisha ee si firfircoon loogu adeegsan karo dib ula xiriirida macaamiisha.
GoSite waa madal dhan-ka-ah oo macaamiisha u sahlaysa inay helaan, ballansadaan, iyo inay ku bixiyaan adeegyadaada khadka tooska ah. Barxadku uma baahna khibrad farsamo oo xitaa wuxuu la yimaadaa barnaamijyada moobiilka iyo lacag-bixinta. Madasha waxaa ka mid ah:
website - degel si buuxda wax uga qabta oo si fudud loo dejin karo loona qaabeyn karo.
Lacagaha - Ka aqbal lacag bixinta Apple Pay, American Express, Visa, Google Pay, MasterCard, Discover… taleefankooda, fariimaha qoraalka, ama waji ka waji.
Rasuulka - hal madal oo dib loogu helo waqtigaaga isla markaana loo kordhiyo qanacsanaanta macaamiisha. Waxaa ku jira fariimaha deg dega ah, qoraalka, fariimaha Google My Business, iyo jawaabayaasha otomaatiga.
jadwalka - habeyso waqtiga oo macaamiisha si toos ah ha u doortaan waqtiyada adiga kuu shaqeynaya. Waxaa ka mid ah jadwalka, dib u dhigista, ka noqoshada, iyo xusuusinta sii qabsiga ah emayl iyo SMS.
Faallooyinka Macaamiisha - codso, ka jawaab, oo ku maamul aragtida macmiilkaaga dhammaan meel keliya. Tan waxaa ka mid ah Google iyo Yelp Reviews.
Maamulka Xiriirka Macaamiisha - GoSite waxay leedahay xarun xiriir lala yeesho oo isku dhafan Quickbooks, Outlook, iyo Google si loo helo xalka maareynta macaamiisha oo aan xuduud lahayn. Xiriirka Hub wuxuu awood kuu siinayaa inaad dirto farriimo, ballan kale qabsato, oo aad u dirto dalabyo dhiirrigelin ah adigoo 1 gujinaya.
Tusaha Ganacsiga - hal marin oo keliya, isla markiiba waad isku xiri kartaa oo aad ku xakameyn kartaa ganacsigaaga in ka badan 70 tusaha ganacsiga ee internetka.
Isdhexgalka - GoSite wuxuu leeyahay API wuxuuna sidoo kale isla markiiba ku xiraa Google, Facebook, Yelp, Thumbtack, Quickbooks, Maps Google, iyo xitaa Amazon Alexa.
Enterprise - GoSite sidoo kale waxay leedahay meelo badan ganacsi awoodaha
Bilaw Gosite Bilaash
Tags: amazon alexaTilmaamaha ganacsigaxarunta xiriirCRMmaamulka xiriirka macaamiishaFacebookkhariidadaha googlexantaqaansheegtatusaha ganacsiga deegaankajaale onlinejadwalka internetkabixinta lacagtaBuugaagta Degdegga ahmaaraynta sumcadThumbtackYelp
Kordhinta Qiimaha Xogta Weyn iyadoo la adeegsanayo Iskuxirnaanta Macluumaadka Weyn ee Pepperdata iyo Toosinta iswada